Diffuser weplastiki, Diffuser weplastiki ebaluleke kakhulu, abavelisi nabavelisi abaziingcongconi eTshayina
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] Uhlobo lo shishino:Manufacturer IMakethe: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide Ngaphandle:61% - 70% ICredit:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report Inkcazo:Ubunzima beplastiki,Isikhululo seoyile esifunekayo seplastiki,Isithako sokutshintsha,Isitshisi soMoya,,
Home > Imveliso > Ubunzima beplastiki
Iintlobo zeMveliso ze- Ubunzima beplastiki , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Ubunzima beplastiki , Isikhululo seoyile esifunekayo seplastiki ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
I-Amazon ephezulu yokuThengisa iArhente eNgcono yeoyile ye-1000ml
Ukuhamba ngeNyotho yeTyhefu yeoyile yeTyhefu efunekayo
I-100ML yoMbane oHlaziyekileyo woMbane oMbi ngeeoyile ezifunekayo
Owona moya ungawenzi umntu okona kufanelekileyo kwiioyile ezifunekayo
Isithambisi esincinci somntu kwiGumbi lokulala i-Nightstand Desk
Ioyile eziBalulekileyo zoMoya obandayo kunye nokuKhanya
I-100ml Intuthuzelo engapheliyo yoNaphakade yeNdlu yaseKhaya
I-350ml Diffuser ebalulekileyo ye-Aromatherapy yeAmazon
Eyona Aromatherapy Diffuser yeGumbi elikhulu lamaGumbi
Esona sixhobo sibalulekileyo seAromatherapy sokuDambisa uxinzelelo lwexhala
Unxantathu Shape Aromatherapy Diffuser yegumbi leOfisi yeofisi
IPyramidi Aromatherapy I-Humidifier ye-oyile yesithambisi seoyile
Umgangatho oMkhulu wezoLimo zeMoya oLungileyo
I-Ultransmit yeNtengiso ye-Lamp Aroma ye-Lamp Aroma
I-Wood Grain Base ngokuzenzekelayo Iphunga lokuhombisa ivumba
Ichwephesha zoMatshini oMoya oLukhuni we-Ultrasonic
Ngumatshini oqinileyo / obuthathaka oMbi ngevumba lamafutha amdaka
Umbala oMncinci oShukumayo weMistile yeLight Miffuser
I-100ml ye-Oile yeDigital ye-oyile yeDiffuser e-Walmart
I-1000 ml enkulu ye-Aromatherapy enkulu ye-oyile yeDiskuser Eli gumbi elikhulu kubalulekile oyile diffuser features uyilo lwale mihla kunye 1000ml umthamo. Eli ziko likhulu ngokwaneleyo ukuba livumba naliphi na igumbi ekhayeni lakho kwaye liphinda linciphise naziphi na iimpawu ezibangelwa ngumoya omanzi wobusika kunye...
I-Grain yeGrain engezantsi kweSisitya seoyile eziBalulekileyo Ifanele amagumbi amakhulu kakhulu, le oli diffuser kubalulekile iye enkulu umthamo ilitha-1 ukuya kutsho kwiiyure ezingama-20 yexesha baleka, iyenza sikuzalise ukuba scenting kwaye humidifying nayiphi na inxalenye ekhayeni lakho. Le modeli features...
I-Amazon ephezulu yokuThengisa iArhente eNgcono yeoyile ye-1000ml DESIGN ENTSHA: Le yeDiscoerer eNtsha yoMsumpa / Ultrasonic Humidifier / Umcoci wo moya / Isitshabalalisi seplastiki. Ngoyilo oludibeneyo oluphathekayo, imilo entle kunye nesitayile esahlukileyo: Ngokuyilayo kuyilo lwabantu abakumgangatho ophezulu...
Ukuhamba ngeNyotho yeTyhefu yeoyile yeTyhefu efunekayo Umatshini wokunyibilikisa i-air aromatherapy udibanisa itekhnoloji ye-humidifier ene-humidifier kunye ne-aromatherapy ye-aromatherapy epholileyo kwimveliso enye. Isichumisi sokukhulisa amanzi siyakwenza ukuba ikhaya lakho likhululeke ngakumbi ukuphefumla kunye...
I-100ML yoMbane oHlaziyekileyo woMbane oMbi ngeeoyile ezifunekayo Yintoni iAromatherapy Humidifier? Ukuphendula lo mbuzo, okokuqala kufuneka sijonge owahlukileyo. Yintoni iaromatherapy? I-Aromatherapy lunyango olubanzi apho ioyile efanelekileyo idityaniswa namanzi, kushushu, kwaye umphunga ugalelwe iyeza. Ioyile...
Owona moya ungawenzi umntu okona kufanelekileyo kwiioyile ezifunekayo Iimbonakalo: Ukukhutshelwa ngokungalunganga kwe-Ultrasonic Umthamo wamanzi ayi-100ml ulungele ukusetyenziswa iiyure ezi-3-5 Ukusebenza okuThule <35db Amanzi asezantsi okuzenzekelayo avale umsebenzi Coca umoya ngeoyile oyithandayo yamanzi...
Isithambisi esincinci somntu kwiGumbi lokulala i-Nightstand Desk Ingcaciso: Hlaziya umoya ngexesha lasehlotyeni kunye nobusika, uvuselela umgangatho womoya owuphefumlayo. I-100 ml itanki yeiyure ezingama-3-5 zokusetyenziswa. Umsebenzi opholileyo <35db. Hlambulula: Ungathathi hlangothi ngocoselelo, ukhupha ii-ion...
Ioyile eziBalulekileyo zoMoya obandayo kunye nokuKhanya Iphefumlelwe zizinto zendalo, le aromatherapy yendalo ibonelela ngephunga elimnandi kunye nokutshintsha umbala kwemeko ukwenza imeko ezolileyo neyonwabisayo naphina. Ilungele ikhaya, iofisi, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlala, isifundo, i-yoga kunye ne-spa....
I-100ml Intuthuzelo engapheliyo yoNaphakade yeNdlu yaseKhaya Le ntlobo ye-oyile ibalulekileyo ye-100ml iya kuba yinto yokuhombisa entle kunye nezinto ezisebenzayo kulo naliphi na igumbi lendlu, kwaye iya kukunika iiyure ezingama-3-5 zokungalunganga. Yenziwe ngesixhobo se-PP ABS. Iya kuzisa i-SPA efana nokuziva...
Umzekelo No.: DT-1735
I-350ml Diffuser ebalulekileyo ye-Aromatherapy yeAmazon Ngaba uyayifuna into yokunyibilika? I-humidifier yezinyo idala umswakama ofanelekileyo wangaphakathi, unakekele impilo yosapho lwakho. Ukuphumla kunye nokulala Gcina ioyile yokuthoba ioyile efanelekileyo kwiofisi ukukunceda ukhulule kwikhefu lakho lesidlo...
Eyona Aromatherapy Diffuser yeGumbi elikhulu lamaGumbi Iimbonakalo: - Iiplasus ezahlukeneyo zeplastiki zisusa ivumba elingalunganga. -Ngenxa yobungakanani bayo obuncinci, i-powus diffuser enokuhanjiswa ngokulula. -Ukunyibilikiswa, ukuthambeka komoya kunye nokucocwa komoya. -Ukukhanya kokukhanya kobusuku bokusebenza,...
Umzekelo No.: DT-S18
Esona sixhobo sibalulekileyo seAromatherapy sokuDambisa uxinzelelo lwexhala -Isaqhwithi yeNkungu ye-Hurricane: Isango elibanzi nelifulelayo lokuhambisa umoya lithumela inkungu yamanzi kwiindawo eziphakamileyo kwigumbi, okwenza kube nzima ukumanzisa itafile. Ukuphuma kwenkungu kuhle kakhulu, kwaye inkungu yamanzi...
Umzekelo No.: DT-X1
Unxantathu Shape Aromatherapy Diffuser yegumbi leOfisi yeofisi -I-3 kwi-1 Umsebenzi we-aroma diffuser ungasetyenziselwa njengowokunyibilikisa, uthambiso lwephunga kunye nokucocwa komoya. I-35db ingxolo engaphantsi yoyilo lweplastiki ayizukuphazamisa xa ulele okanye usebenza. -Izikhanyisi ezi-7 eziguqukayo ze-LED,...
IPyramidi Aromatherapy I-Humidifier ye-oyile yesithambisi seoyile I-Ultrasonic humidifier yindlela efanelekileyo yokongeza umswakama, umoya otofotofo ekhaya, eofisini, ehotele, kwi-spa okanye kwitafile yeyoga ye-yoga, indawo yokusebenza ii-cubicles, njl. I-Aromatherapy Diffuser yomsebenzi weAromatherapy: yongeza nje...
Umgangatho oMkhulu wezoLimo zeMoya oLungileyo Isicoci soMoya wendalo kunye noHlobo lokuphefumlisa umoya Ukusuka ekugcinweni kweebhaktiriya ezihamba emoyeni e-bay, ekuncedeni ukuba uphefumle ngokulula unyaka wonke, ukunika ikhaya lakho ivumba elitsha elimnandi, ivumba elimnandi lolona gumbi liphezulu lomsebenzi...
Packaging: Ibhokisi engaphakathi: 140 * 100 * 145mm kunye ne-Master carton: 440 * 420 * 470mm / 36pcs
I-Ultransmit yeNtengiso ye-Lamp Aroma ye-Lamp Aroma Izizathu ezingakumbi zokuthanda i-Aromatherapy Diffuser yakho Ukuba uhlala unengxaki yokulala ebusuku, unokufumana ukukhululeka ngokudibanisa ioyile eyimfuneko kwi-disuser yakho yeplastiki. Kukho ii-oyile ezikhuthaza ukukhutshwa kwe-serotonin kunye ne-dopamine...
Packaging: Ibhokisi engaphakathi: 170 * 170 * 155mm; I-master carton: 525 * 355 * 330mm / 12pcs
I-Wood Grain Base ngokuzenzekelayo Iphunga lokuhombisa ivumba Ichiza lokuphambuka ngombhobho wokuthoba wamanzi okuhombisa kunye noyilo lwesimbo se-zen, i-DITUO 300ml I-oli eyi-Grain Efunekayo ye-oli eyi-SURE ibeka buthule impazamo epholileyo kwaye ikunikeza uyolo lweli phunga elihlaziyayo. Le aromatherapy diffuser...
Ichwephesha zoMatshini oMoya oLukhuni we-Ultrasonic Dala indawo yoxolo nokuzola naphi na ngeDoma yeDooma. Inhle kwaye iyathandeka, i-White iyayonwabela imizwa yakho kwaye yongeza ukunethezeka kubomi bemihla ngemihla. I-diffuser yeplastiki inombala otshintsha umbala wokutshintsha kwemozulu, ohamba ngombala wemibala,...
Ngumatshini oqinileyo / obuthathaka oMbi ngevumba lamafutha amdaka Gcina ikhaya lakho licocekile kwaye livumba mihla le kunye neOrganizer Ultrasonic Arhente Diffuser kunye neHom Humidifier enamafutha. Umbala oMhlophe ngokwenza udibaniso lwesitayile kulo naliphi na igumbi, kunye noyilo lwale mihla ilungele ikhaya lakho...
Umbala oMncinci oShukumayo weMistile yeLight Miffuser Yenza imeko yokuphumla kunye nale mibala etshintsha iphunga elahlukileyo kwiKhaya lakho. Oku kuhluka kweplastikhi kunokukunceda ukuphakamisa imo yakho kwaye kunciphise uxinzelelo kwimini yakho exakekileyo ngokukhulula ukuqhuma kweziqholo zeAromatherapy. Kulula...
I-100ml ye-Oile yeDigital ye-oyile yeDiffuser e-Walmart Iiplasus zePlasitiki, iahydiyus eyaphukayo ye-ultrasonics, eguqula naliphi na indawo ngamanzi amancinci kunye namaconsi ambalwa eoyile yakho efunekayo. Ukuhlala kwikona yeedesika yakho okanye kwitafile yakho esecaleni kwebhedi, ii-mini diffuser zikucengezela...
KwiChina Ubunzima beplastiki Abaxhasi
DITUO Isixhobo seplastiki seDigital sinezinto ezininzi ezilungileyo njengokungezantsi:
Ukucoca umoya. Isixhobo sePlastic Diffuser sivelisa isixa esikhulu se-anion ye-oksijini esebenzayo, ekhupha impendulo enamandla kwiimolekyuli zegesi ezinobungozi emoyeni, sisusa ngokupheleleyo, kwaye siphelise ngokupheleleyo ingozi ye-formaldehyde, benzene kunye ne-ammonia.
ukusetyenziswa kokhuseleko. Isixhobo seoyile esifunekayo sePlastiki sinokuvelisa i-100 yeempazamo ezipholileyo ezinokugcina izithako ezisebenzayo zeoyile ezifanelekileyo, ukuze iioyile ezifanelekileyo zifunyanwe ngokulula ngumzimba ukufezekisa iziphumo eziphezulu; ngaphakathi kwemizuzwana emi-2 unokuziva isiphumo searomatherapy. Ngokwahlukileyo ngokwahlukileyo kukupholisa ngokwesiko kunye nendlela evuthayo eshushu. Itekhnoloji yayo yenkungu ebandayo ayonakalisi nayiphi na ioyile eyimfuneko, ayibangeli ungcoliseko lwesibini, kwaye ikhuselekile ukuba ingasetyenziswa.
ubukhulu obuncinci. Isithako Diffuser umthamo wamanzi omalunga ne-100ml, yongeza nje amaconsi ama-2-3 eoyile eyimfuneko emanzini ukufezekisa i-aromatherapy.
Ukuxhathisa okomeleleyo Umoya ococekileyo ofanelekileyo wenziwe ngezinto ezikhethekileyo ze-ABS, ezichasene neoyile, amanzi kunye neekhemikhali corrosion.
umoya wangaphakathi ube lutsha. Xa usamkela iindwendwe ukuba zityelele, okanye unake ivumba egumbini, ivumba lephunga elichaseneyo ukwenza umoya ube lutsha.
Ukugxila. Xa uhleli ixesha elide okanye ufunda wedwa, vumba ivumba le oli eliyimfuneko ukuze lihlaziyeke.
Phumla ngaphambi kokuba ulale. Xa uxakekile yimini yakho kwaye ufuna ukuphumla umzimba nengqondo, uya kuziva uhlaziyekile kwaye ukhululekile ngenxa yevumba lephunga lephunga.
Isikhululo seoyile esifunekayo seplastiki
Usb Ubunzima beDesika